Hlola i-Cuba - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eCuba
Okufanele ukwenze eCuba
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eCuba
Bukela ividiyo mayelana neCuba
Hlola i-Cuba, enkulu kunazo zonke I-Caribbean isiqhingi, esiphakathi koLwandle lweCaribbean nolwandle oluseNyakatho ye-Atlantic. Iphakathi kwe-145km (amamayela angu-90) eningizimu ye-Key West, eFlorida, phakathi kwe Cayman Islands futhi Bahamas, entshonalanga ye Haiti, empumalanga ye Mexico nasenyakatho nentshonalanga ye Jamaica.
ICuba yaba ngumvikeli wase-US e-1898 ngemuva kokuba amabutho aseMelika nawaseCuba ehlule amabutho aseSpain ngesikhathi sempi yaseSpain-America. E-1902, iPlatt Amendment yaqeda ukuhlasela kwamasosha ase-US eCuba, kepha iMelika yagcina ilungelo lokungenelela ezindabeni zaseCuba ukuze "kuvikele inkululeko yaseCuba futhi kugcinwe uhulumeni olwanele ukuvikela impilo, impahla, kanye nenkululeko yomuntu ngamunye ”. Phakathi kwe-1902 ne-1959, izakhamizi eziningi zase-US zazihlala eCuba noma zivame ukuya eCuba. Umnotho waseCuba uthembele kakhulu kwezokuvakasha ezivela e-US kanti iHavana yayinemibukiso eminingi, imicimbi, namahhotela anakekela izivakashi.
I-Havana - inhlokodolobha yonke kanye nobusuku obushayayo
IBaracoa - idolobha elingasogwini lolwandle, nedolobha lokuqala laseCuba.
IPinar del Rio - isikhungo sezimboni ze-cigar
Santa Clara - Impi ephumelela kakhulu ka-Ernesto “Che” Guevara ngesikhathi seNguquko. Kumiswa imanoleum emaphethelweni edolobha futhi manje ubambe izinsalela zakhe, ezitholwe eBolivia kuma1990s.
ISantiago de Cuba - idolobha lasogwini elinothile ngethonya leCaribbean
I-Trinidad - I-World Heritage Site enezakhiwo ezibukekayo, zamakholoni-era
I-Varadero - indawo ethandwa yolwandle, empumalanga yeHavana, igcwala kakhulu ngabavakashi.
I-Cayo Largo - isiqhingi esincane esinezindawo zobunqunu
I-Isla de la Juventud - isiqhingi esikhulu eningizimu yeHavana
UJardines del Rey - isixhumi esiqhingini samaholide okuvakasha okubandakanya i-Cayo Coco neCayo Guillermo
UMaria la Gorda - idolobhana elincane elinezinketho ezithile ze-snorkelling kanye ne-diving
I-Varadero Beach - Ibhishi le-20-kilometer ubude nesihlabathi esimhlophe namanzi
IViales National Park esifundazweni iPinar del Rio, inezintaba nemihume. Inezindawo zokwakha izivakashi ezikhiqizwe kangcono kakhulu amapaki ezwe lonke laseCuba.
IParque Nacional La Güira (La Güira National Park) - Elinye ipaki likazwelonke esifundazweni sasePinar del Rio, elinezintaba nemihume, kodwa ngaphandle kwezindawo eziningi zokuvakasha.
Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario - I-UNESCO Biosphere Reserve ezintabeni zaseSierra del Rosario esifundazweni sasePinar del Rio. Izindawo eziphambili yiSoroa neLas Terazzas.
IParque Nacional eCiénaga de Zapata (ICiénaga de Zapata National Park) - Ipaki kazwelonke esifundazweni saseMantanzas, efana neFrance's Everglades National Park, enamachibi amakhulu kanye nokubuka izinyoni okwaziwa umhlaba wonke, ukudonsela phansi kwasolwandle, kanye namabhishi; kanye nokuhlasela kwe-1961 American Bay of Pigs.
IGran Parque Natural Topes de Collantes (iTopes de Collantes National Park) - Ipaki likazwelonke ezintabeni zaseSierra del Emcambray, eChienfuegos, eVilla Clara kanye nezifundazwe iSancti Ghostus.
IParque Allejandro de Humboldt (esifundazweni saseGuantanamo) esiseduze ne-40km kusuka kwi-baracoa, inikeza ukuhamba nokuhamba ngezindlela zokonga
Isikhumulo sezindiza iJose Martí International ngaphandle kwaseHavana siyisango elikhulu lokungena eCuba futhi sisebenza ngezindiza ezinkulu ezivela ezindaweni ezise-United States, eCanada, Mexico, neYurophu. Kukhona izindiza zesifunda ezivela kwezinye iziqhingi zaseCaribbean. Inkampani ethwala izwe lonke eCuba yiCubana de Avacion, exhuma lesi siqhingi ezindaweni ezimbalwa eziya eMexico, South kanye naseMelika Ephakathi, eCanada naseYurophu.
Ngenkathi iHavana iyindawo ethe xaxa yokungena, kukhona nezindiza eziya e-Antonio Maceo Airport kusuka kwabanye omakhelwane baseCaribbean baseCaribbean, eJamaica, kanye Haiti futhi futhi ukusuka ezindaweni ezikude kakhulu, njenge Miami, Toronto, Madrid & Paris. ISantiago de Cuba ixhumene nayo yonke iCuba ngokuxhumana komgwaqo nangololiwe.
Kukhona futhi izindiza ezijwayelekile zokushayela amaholidi ezindaweni zokungcebeleka ezifana neVaradero kanye nasempumalanga yedolobha laseHolguin (iCondor indiza lapha isuka lapha Frankfurt), futhi lezi kwesinye isikhathi zingabiza kakhulu kunalezo ezizayo I-Havana.
Izikhumulo zezindiza zonke zinomoya omoya ngokugcwele futhi zanamuhla, uma ziqhathaniswa nezinye izindawo eziseCaribbean, zinikeza usizo oluhle lwezokwelapha uma kunezinkinga, futhi zivame ukungabi nokuhlupheka mahhala.
IVíazul ulayini webhasi onamandla waseCuba futhi ungokhetho olungcono kakhulu lokuhamba komphakathi ukuvakashela lesi siqhingi. Agijimisa abaqeqeshi abasemoyeni abahamba kahle abenomoya omude onamawashi okugeza namathelevishini ezindaweni eziningi ezithakazelisa izivakashi. Amabhasi aya ngokuxhamazela kancane, kepha athembekile futhi afika ngesikhathi.
Kuyenzeka futhi uhambe phakathi kwezinye izindawo ezidumile zezivakashi, ezinjengeHavana neVaradero, kumabhasi abakhethekile abahamba nge-4-5. Izindleko zingama-dollar ambalwa kodwa zinconywe kakhulu uma ungahleleli ibanga lonke - futhi ungacela umshayeli ukuthi ame lapho!
Umugqa oyisitimela omkhulu wezwe uhamba phakathi kweHavana neSantiago de Cuba, lapho kunendawo enkulu eSanta Clara naseCamagüey. Izitimela zibuye zigijimelele nakwamanye amadolobha afana neCienfuegos, iManzanillo, iMoron, iSancti Ghostus, nePinar del Rio.
Imigwaqo epholile nendawo enhle yokwenza i-Cuba kube yizwe elihle ukuhamba ngebhayisikili. Kuzofanele ulethe eyakho ibhayisikili ngoba amabhayisikili alungele ukuhamba awatholakali kalula eCuba. Musa ngaphansi kwanoma yiziphi izimo ukuqasha ibhayisekili eCuba njengoba uzothola iJunker noma okuthile okuzoshiya emuva kwakho kungavuthiwe.
Imigwaqo ezindaweni eziningi eCuba inengqondo, kepha kungahle kube ngumqondo omuhle ukuletha ibhayisekili lasezintabeni. Amabhayisikili asentabeni anamandla futhi avumela ukushayela okungcono ngaphandle komgwaqo. Qiniseka ukuthi uletha zonke izingxenye ezisele ongase uzidinge lapho, ngoba ngeke zitholakale eCuba. Njengoba imininingwane yecasas itholakala ngisho nasemadolobheni amancane, kulula ukuhlela uhambo. Ukudla komgwaqo kuvame ukutholakala endaweni yakini ngemali engabizi kakhulu yaseCuba, kodwa qiniseka ukuthi uma uhamba ezindaweni ezikude uthwala ukudla okwanele (namanzi!). Ukuthola amanzi asebhodleleni ngaphandle kwamadolobha amakhulu kungaba yinkinga eqondile.
Amabhikishi ahlangana kaningi nentshisekelo; lapho uthatha ikhefu uvame ukusondeza abantu bendawo abanelukuluku. Kungenzeka ukuthatha amabhayisekili ngebhasi lokuvakasha, njenge- “Viazul”, ukumboza amabanga amakhulu. Kufanele uhlele isivumelwano somuntu siqu nomshayeli kodwa, ozolindela ibhonasi elincane ngokubuya. Kungenzeka futhi ukuthatha amabhayisekili ezitimeleni futhi ushaye nangamabhayisekili (wavela amanye ama-pesos aguqukayo esondela kubashayeli ukuze abambe ukunaka kwabo).
Izikhathi ezinhle okufanele uhambe ngazo ziphakathi kukaDisemba no-Ephreli, ukugwema izivunguvungu ezesabekayo nezivunguvungu ngaphambi kukaDisemba nokushisa okunamathelayo kwehlobo laseCuba okungabekezeleleka kwabanye. Lesi futhi yisizini ephezulu ngakho-ke lindela ukwenyuka kwentengo ngalesi sikhathi.
Ulimi olusemthethweni Cuba iSpanishi, luyafana ncamashi nolwesi i-Dominican Republic nePuerto Rican Spanish, noma inguqulo lapha ihluke kakhulu kulokho okukhulunwayo ngaphakathi Spain, EMexico naseNingizimu Melika.
Isisekelo kuya kwesokudla isiNgisi siyakhulunywa kwezinye izindawo zabavakashi kanti nolimi akufanele luvimbe ukuvakashela izwe kubavakashi abangakhulume iSpanishi abakwazi ukukhuluma isiNgisi, yize iSpanishi eyisisekelo singaba usizo, ikakhulukazi ezilungiselweni ezingekho emthethweni. AmaCuba ajabulele ukukhuluma nezivakashi, ikakhulukazi uma uhlala nazo “ezinhlwini zeCasas” nolwazi oluthile lweSpanishi luzokusiza uqonde okuhlangenwe nakho kwamaCuba njalo.
Bheka ophahleni lweTrinidad (Cuba), Cuba
Hambani ngeMalécon yaseHavana ngesikhathi sasekuseni futhi nihambisane namasiko athile weHavana. Qaphela izifebe; zinzima kule ndawo, ikakhulukazi ezigabeni lapho izivakashi zabesilisa ezimhlophe ezicebile zaziwa ukuhamba khona.
Hambani nizungeze eHavana Vieja, ikakhulukazi ekuseni lapho idolobha livuka. Ungathatha futhi uhambo olungcono kakhulu (futhi olunabile) lokuhamba esiqhingini nge "Havana Frans", umthwebuli wezithombe waseDutch ohlala eHavana.
Uma unemali, iya eTropicana, okuyi-hang-Mafia hangout ephethwe futhi esetshenziswa umbuso. I-Tropicana itholakala, njengoba bekulokhu kunjalo, ekujuleni kwendawo enobunzima bomuthi onomgwaqo omncane phakathi kwedolobha, emuva ngemuva kwezihlahla, futhi njengoba intengo yayo yokwamukelwa ibiza kakhulu kunoma yimuphi umuntu waseCuba ongabiza, abantu abaya lapho cishe bakhona bonke abavakashi bamazwe aphesheya. Ikilabhu isenamasiko akudala anjengensizakalo yetafula, izingubo ezigqamile, izibani ezikhazimulayo, indawo yokuhlola ijazi, njll. Izindudu zangempela (kodwa ezincane) ziyatholakala futhi zingabhema ngaphakathi kwendawo, kufaka phakathi esiteji. I-Tropicana igcinwe kahle kangangokuba icishe ibe isikhathi esilinganayo (ngaphandle kwesimanje-imishini yesiteji nokuntuleka kwekhodi yokugqoka) futhi, inqobo nje uma ungazithethelela iqiniso lokuthi iningi labantu baseCuba alikwazi ukukhokha lokho okudingayo ayenziwa, nokuthi abantu abasebenza lapho bebangeke babe khona uma bengaqashwa lapho, ubusuku bakho buqinisekile buzoba mnandi kakhulu.
Iya lapho ubona khona ukusebenza komdanso we-Afro-Cuba, okhona cishe kuyo yonke imiphakathi.
Iya ubone umculo wendawo, okhona cishe kuyo yonke imiphakathi.
Iya emakilabhini, wonke adlala kakhulu izinto ezinjengeCuban reggae ne-Cuban rap, kanye nomculo we-Cuba wase-Cuba ozwakala ngaphezulu onamazwi wanamuhla.
Iya emabhishi - kepha qaphela, njengokungena Jamaica, lokunxenxa izifebe nabantu abesilisa, abesilisa nabesifazane.
Phuma emaphandleni ukhulume nabalimi. Bheka izimakethe zendawo. Kunezinhlobo ezimbili zemakethe - izimakethe eziqhutshwa yisifundazwe, ezithengisa ukudla kushibhile kakhulu kanti zona abantu baseCuba bagcina izincwadi zokwenza imali (futhi ongeke ukwazi ukuyothenga ngoba ngeke ube nencwadi yakho) Izimakethe -Inzuzo lapho abalimi abathengisa umkhiqizo wabo ngqo, okuyiqiniso, kubiza kakhulu.
Lindela ukuzwa uCarlos Santana enenqwaba yokuqhuma kwamawindi ngezikhathi ezingafani zosuku.
Phuza ujusi omusha wezithelo, ogeleza njengamanzi eCuba ngenxa yobuningi bezithelo ezintsha.
IColon Cemetery, amathuna athakazelisa kakhulu anabantu abaningi baseCuba.
Ngaphansi kwamanziCuba, Scuba Diving, Snorkeling eVaradero.
Amabhange avame ukuvalwa ngo-3 pm, nangaphambilini ngosuku lokugcina lwenyanga. Ama-Cadecas (ama-exchangeaus) angavulwa isikhathi eside, ikakhulukazi emahhotela. Lapho uya ebhange vumela isikhathi esanele njengoba insizakalo ivame ukuhamba kancane futhi abantu abaningi kungenzeka ukuthi sebelindile. Abezinye izizwe bangathola ukwelashwa okuncono ngokushintsha ithiphu elincane.
Kufanele ulethe ipasipoti yakho uma ufuna ukushintshanisa amasheke wabahambi noma ukwenza ikhadi lesikweletu kusengaphambili, yize imali ingaguqulwa ngaphandle kwepasipoti. Amanani wokushintshanisa ayahlukahluka kuye ngezindawo, futhi amanye amahhotela anikela ngamanani wokushintshashintsha amabi kakhulu kunamabhange.
Njengakwelinye izwe elisathuthuka, iningi lezimpahla ezitholakalayo zenzelwe izivakashi ukubuyela ekhaya. Izinto ezinkulu ezithunyelwa eCuba kubavakashi yi-rum, i-cigar, nekhofi, konke okutholakala ezitolo eziphethwe nguhulumeni (kubandakanya isitolo samahhala esikhumulweni sezindiza) noma emigwaqweni. Ngokuthengisa kwangempela, kufanele ukhokhe inani elisemthethweni ezitolo zezomthetho.
AmaCuba nawo enza kahle ekwakheni umculo onjenge-salsa, indodana, ne-Afro-Cubano. Ungathenga ama-CD noma ompompi noma kuphi.
Uma uhlela ukuthatha amanani amakhulu (amabhokisi amaningana noma ngaphezulu) we-cigars, qiniseka ukuthi uzithengile ngokusemthethweni esitolo esivunyelwe esikunikeza imibhalo efanele yokuthenga. Izizwe zakwamanye amazwe zivunyelwe ukuthumela kwamanye ama-cigars we-50 (imvamisa i-25 ebhokisini) ngaphandle kwezimvume noma amaresidi akhethekile, kepha ukuthunyelwa kwamanye amazwe kudinga amaresidi asemthethweni. Uma uthenga ama-cigar ashibhile emigwaqweni futhi ungenayo i-invoice yokuthenga esemthethweni, amakhoyo akho angabanjwa. Futhi, xwayiswa ukuthi noma ngabe yikuphi ukuthenga kwama-cigar aseCuba angaphandle kwezitolo ezivunwe nguhulumeni (ngisho ezindaweni zokungcebeleka) kunamandla okuba mbumbulu, nokuthi "isisebenzi sefektri ye-cigar eyeba efektri" asikho nganoma yisiphi isamba esithandekayo. Uma uthola imali ethengiswayo evela kubathengisi basemgwaqweni, kungenzeka ukuthi uthola izingwevu, ezinye zazo ezingeke zenziwe nogwayi. Ngaso sonke isikhathi qiniseka, noma ngabe uthenga kuphi, ukuthi isitembu sewaranti yohulumeni waseCuba sinamathele kahle ebhokisini le-cigar ..
Ngokusemthethweni uzodinga imvume yokuthumela imidwebo emikhulu kune-70cm / side. Uma uthenga ubuciko esitolo esivunyiwe bazokunikeza nayo idokhumenti edingekayo, equkethe iphepha elilodwa nesitembu esisodwa esizobe sinamathele ngemuva komdwebo wakho. Izinombolo ezisesitembu nakwiphepha kufanele zihambisane. Izindleko zedokhumenti imayelana ne-CUC 2-3. Eqinisweni, kungenzeka ukuthi akekho umuntu ongaba nentshisekelo kwimidwebo yakho.
Njengoba zonke izindawo zokudlela zingezikahulumeni futhi ziphethwe ngabasebenzi, ukudla eCuba kudume ngokungemthetho. Uma ulindele ukuthi i-pepperpot spiciness eshisayo etholakala kwezinye iziqhingi zaseCaribbean, cabanga ukuthi isidlo sezwe lonke eCuba ilayisi nobhontshisi (moros y cristianos). Isisho esidumile sithi ukudla okungcono kakhulu kweCuba kungatholakala e-United States. Ngaphakathi kweCuba, ukudla okungcono kakhulu kuvame ukutholakala kwi-casa yakho ethile noma ezindaweni zokudla (ezindawo zokudlela eziphethwe abantu emakhaya).
Ubhontshisi omnyama yisisekelo esiyinhloko emizini yaseCuba. AmaCuba adla ikakhulukazi ingulube nenkukhu yenyama. Inyama kanye nama-lobster alawulwa nguhulumeni, ngakho-ke akukho emthethweni ukuthengisa ngaphandle kwamahhotela nezindawo zokudlela eziphethwe nguhulumeni, noma kunjalo izipesheli ezikhethekile zasemini / zokudla kwakusihlwa ziningi kubavakashi. Ungahle ubone i-turtle kumamenyu ePaladares, kodwa uqaphele ukuthi zisengozini futhi ukuzidla akukhona emthethweni.
Iminyaka yokuthengwa kotshwala obudakayo yi-18.
Ama-cocktails kazwelonke aseCuba afaka i-Cuba Libre (i-rum ne-cola) kanye neMojito (i-rum, i-lime, ushukela, amaqabunga eminti, iklabhu kasawoti neqhwa).
Uma ucela i-rum endaweni yokudlela yezwe encane ungamangali uma itholakala ngebhodlela kuphela. I-Havana Club uhlobo lukazwelonke futhi ithandwa kakhulu
I-Cristal ubhiya olula futhi itholakala ezitolo "zedola" lapho amaCuba nama-Cucs kanye nezivakashi bengathenga khona. AmaCuba akhetha iBucanero Fuerte, okuthi kuyo i-5.5% utshwala buqinile (yingakho ubhiya omnyama “fuerte”). Bobabili uCristal neBucanero bakhiqizwa ngomsebenzi ohlanganyelwe namaLabatts we Canada, ubhiya wayo okuwukuphela kobhiya waseCuba othengiswayo e-CUC. Uhlobo olunamandla, iBucanero Max luyatholakala - ngokuyinhloko luyatholakala eHavana.
Kukhona nama-brews amancane, awatholakali ndawo zonke, njengeHatuey neCorona del Mar.
Uma ufuna ukuzwa okuthile kwempilo yangempela yamaCuba, izindawo ezingcono kakhulu zokuhlala yizihlobo zamakhasasi (izindlu ezizimele ezinelayisensi yokuhlinzeka ngezinsizakalo zokuhlala kubantu bokufika). Ashibhile kunamahhotela futhi ukudla cishe kungcono ngaso sonke isikhathi kunokuba ungakuthola ehhotela. Imininingwane yeCasas inala ngisho nasemadolobheni amancane; ziyabiza kakhulu eHavana kunakwenye indawo. Qaphela ukuthi noma iyiphi insiza enikezwa yi-casa ethize ngaphandle kwendawo yokuhlala, njengokukuyisa esiteshini sebhasi, izongezwa ku-bill yakho, noma ngabe lokhu kuchazwe ngaphambili. Izinto ezinjengamanzi asemabhodleleni anikezwe ngokudla kwakho nazo zizokhokhiswa. Ngaso sonke isikhathi qiniseka ukuthi ukhuluma nomniniyo ngezinto ezizokubiza uma ufika ukugwema isimangalo esingathandeki kamuva.
Iminyuziyamu yaseCuba inala, kuvulwa kaningi, futhi imvamisa iyakhokhelwa ukwamukelwa. Ungathola ukuvakasha okuqondiswa komunye wabasebenzi; noma ungakhulumi iSpanish, lokhu kungaba wusizo. Ngokujwayelekile bazokwenzela ukuthi uhlole izikhwama zakho, futhi bakhokhise imali encane ngelungelo lokuthatha izithombe ngaphakathi.
ICuba ngokuvamile iyizwe eliphephe kakhulu; Amaphoyisa aqinile futhi aqhamile, ahlanganiswe nezinhlelo zokubuka komakhelwane (ezaziwa njengeKomidi Lezokuvikelwa Kwezinguquko, noma iCDR) ngokusemthethweni ukuze zigcine imigwaqo iphephile ebugebengwini obunobudlova. Cishe abukho ubugebengu besibhamu, ukuphanga ngobudlova, amasiko obugebengu obuhleliwe, ubuqili bentsha, izidakamizwa noma izindawo eziyingozi ezingahambi. Izigebengu zasendaweni zizama ukugwema ukukhomba abantu bangaphandle ngazo zonke izindleko ngoba bezokhokha inani elinyukayo kakhulu uma zibanjwa kodwa khumbula ukuthi wonke amakati amnyama ebumnyameni futhi ungaba yisisulu noma ngabe kwenzeka ngengozi. Kodwa-ke, izinga elithile lokuqonda okuvamile nokuqapha kuyelulekwa, ikakhulukazi emadolobheni amakhulu.
Uhlelo lwezomthetho eCuba luhluke kakhulu kwamanye amazwe futhi kungcono ukugwema ukubanjwa kwephula noma yimuphi umthetho. Amabha, izindawo zokudlela, kanye namahhotela ngeke manqikaze ukushayela amaphoyisa uma kunenkinga futhi kungcono ukusiphazamisa isimo.
Imithetho yezidakamizwa ingaba namandla futhi ibe yimbi. Kungashiwo okufanayo ngemithetho ephathelene nobufebe. Ukungeniswa, ukutholakala noma ukukhiqizwa kwezithombe zocansi akuvunyelwe ngokuphelele. Akujwayelekile ukuthi kubonakale inja igijimisana nemithwalo ethwala imithwalo ifika, ikakhulukazi lapho ifika ivela emazweni athambekele ekushushumbisweni kwezidakamizwa, ngakho-ke qiniseka ukukhiya kanye / noma ukusonga imithwalo yakho ukugwema noma yiziphi izinkinga kulokhu. Ngaphezu kwalokho, kuphambene nomthetho ukuthatha izithombe zezikhumulo zezindiza, izakhiwo zikahulumeni, ezombusazwe, ezempi, nezamaphoyisa.
Musa ukuphuza amanzi ompompi. Amanzi eCuba ngokuvamile aphephile; kepha-ke, kuchaywe kakhulu ukubulala onke amagciwane asezindaweni ezishisayo. Abantu abangajwayele ukugxotshwa kwe-chlorine enjalo bangathola ukugabha, ukuhanjiswa yisisu noma ukuqaqamba kwesisu.
Qaphela ukuthi abantu bendawo abaningi banobungane futhi isisusa sabo esisodwa ingxoxo. Kodwa-ke, imikhonyovu embalwa eyakhiwe kahle ikhona.
AmaCigars athengiswa kakhulu izivakashi eziya eCuba, nokho iningi lezingcwecwe ezathengwa izivakashi eCuba ngesikhathi sokuvakasha kosuku olulodwa lwaseHarana noma esitolo samahhala sezindiza iVaradero ziyize. Qiniseka ukuthi uthenga ugwayi ezitolo ezisemthethweni, ungasethembi ifektri kagwayi lapho umhlahlandlela wokuvakasha ukuyisa khona.
Amanzi avame ukuthengiswa ezizungeze izindawo zabavakashi. Kwesinye isikhathi la mabhodlela agcwaliswa ngamanzi ompompi wasendaweni futhi abekwe uphawu kabusha (okungaba yingozi). Imvamisa ungakubona lokhu kuphazamisa ebhodleleni, kepha hhayi njalo; kunoma yikuphi ukuthi amanzi kampompi azonambitha ahluke kakhulu kumanzi asemabhodleleni futhi kufanele agwenywe kuzo zonke izimo. Abantu bendawo banikela ngokushintshana ngemali 'ebhange lasekhaya' lapho abomdabu bangathola amanani amahle kakhulu futhi babuze ukuthi ungasali ngaphandle ngenkathi benza isivumelwano njengoba ubukhona bakho bezothuthukisa izinga. Uma ubanikeza imali yakho ngeke uphinde ubabone.
Izindlu zangasese ezifana ne-shampoo, i-conditioner, ama-razor, ama-tampon namakhondomu nakho kunzima ukuzithola futhi kuyabiza, ngakho-ke funda ngaphambi kokuhamba.
Iphepha lasendlini alikho ezindlini eziningi zangasese, ku I-Havana nezinye izindawo okungenzeka ukuthi uhambela kuzo.
Uma ufuna ukuhlola i-Cuba, uma uhlala ehhotela noma kwi-casa ethile, kungenzeka kube khona ithelevishini, futhi ukubukela ithelevishini laseCuba kuyindawo enhle yokubuka ukuxubana okuyingqayizivele kwesiko le-Cuba, ezemidlalo nezepolitiki ezinempikiswano.
I-Old Havana noHlelo lwayo LokuBiyela
I-Trinidad kanye ne-Valley de los Ingenios
ISan Pedro de la Roca Castle, eSantiago de Cuba
Umhlaba Wasemandulo Wokutshala Kwekhofi Wokuqala e-South-East Cuba
Isikhungo Somlando Sase-Urban eCienfuegos
Isikhungo Somlando Camagüey